ဘဝအပျေါ သံဝဂေစိတျဖွဈပျေါခွငျး - Latest Myanmar News
သောကဖွဈလာလို့ မထိနျးနိုငျတဲ့အခါ ငိုခဲ့ရတဲ့အခါတှကေလညျးအမြားကွီး။ ကိုယျဆငျးရဲမှု စိတျဆငျးရဲမှုဆိုတာတှလေညျး ကွုံတှရေ့ပါတယျ။
စိတျပငျပနျးမှုတှဆေိုတာလညျး မြားစှာကွုံတှရေ့လို့ ဘဝခရီးဟာ လြှောကျလမျးကွသူတိုငျး ဘယျသူမှ မသကျသာဘူးလို့ ဒီလိုပွောရမှာ။
ရဟန်တာပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး ဘဝခရီးကို ဖွတျသနျးကွရတဲ့အခါမှာသကျသာမှုရသလားဆိုတော့ ဘယျသကျသာမှု ရမလဲ။
အရှငျသာရိပုတ်တရာကိုယျတျောမွတျကွီးဆို ဗိုကျ​နာရတယျ ဒါထငျရှားတာလေးတဈခု။ အရှငျမဟာ မောဂ်ဂလာနျ ကိုယျတျောမွတျကွီးလညျးရောဂါဝဒေနာတှေ ခံစားရတယျ။
နောကျဆုံးကွတော့ လုပျကွံသတျဖွတျခွငျး ခံလိုကျရတယျဆိုတဲ့ အခုခတျေအနေ နဲ့ပွောမယျဆိုရငျ ရိုးရိုး ပရိနိဗ်ဗာနျစံရတာ မဟုတျဘူး။ လုပျကွံသတျဖွတျလို့ ပရိနိဗ်ဗာနျစံသှားရတယျလို့
ဒါ ဘဝရဲ့အခကျအခဲတှပေဲ။သာမနျအားဖွငျ့ မစဉျးစားပဲနလေို့ရှိရငျ ဘဝမှာအခကျအခဲ မရှိဘူး။ပြျောစရာကွီးလို့ မွငျကောငျး မွငျလိမျ့မယျ။ ပြျောစရာမဟုတျဘူး။
ဘယျလောကျပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဘဝပဲဖွဈဖွဈ အခကျအခဲတဈမျြိုးမြိုးတော့ ကွုံတှမှေ့ာပဲ သခြောပါတယျ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ ကိုယျတျောမွတျကိုယျတိုငျပဲဘဝခရီးကွီးကို လြှောကျလှမျးတဲ့အခါမှာ စိတျဆငျးရဲမှုတှအေကွိမျကွိမျကွုံတှရေ့တယျ။ ဘုရားဟာ ဘယျလောကျပဲ တနျခိုးတျောအနန်တနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈစေ
ဘဝခရီးကိုသှားတဲ့အခါမှာ အမွဲတမျးဖွောငျ့တနျးနတေဲ့ ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးရတာ မဟုတျဘူး။
တဈခါတဈရံ လူစားတဲ့အစာမဟုတျတဲ့ မွငျးစာတှေ စားနရေတဲ့အခါမြိုးတှေ ကွုံတှရေ့တယျ။ တဈခါတဈရံ လုံးဝစားစရာမရှိတဲ့အဖွဈနဲ့ ကွုံတှရေ့တယျ။ တဈခါတဈရံဆနျ့ကငျြဘကျပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့ ဆနျ့ကငျြ့မှုတှနေဲ့တှကွေုံ့ရတယျ။
စိတျဆငျးရဲဖှယျ အနအေထားတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့တာတှေ ရှိတယျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျ ကိုယျတျောမွတျရဲ့ဘဝမှာ စှပျစှဲမှုကွီး (၂)ကွိမျခံရတယျ။ အငျမတနျမှ ကွီးမားတဲ့ စှပျစှဲမှုကွီး အခုခတျေလိုဆို ဖွရှေငျးဖို့ အငျမတနျခကျခဲတဲ့ စှပျစှဲမှုကွီး (၂)ကွိမျခံရတယျ။ လုပျကွံသတျဖွတျမှုက (၃)ကွိမျခံခဲ့ရတယျ။
ဘဝဆိုတာ ဘုရားတောငျမှ ရှောငျလို့မရတာပါလားလို့ ဘုနျးကွီးတို့ တရားနာပရိတျသတျတှေ ဘဝပျေါမှာ သံဝဂေဖွဈဖို့ပါ။
ဘယျသူ့ဘဝပဲဖွဈဖွဈ အဆငျပွနေတေယျဆိုတာ တဈခဏမြှသာဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာ အခကျအခဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျသှားရတဲ့ဘဝတှခေညျြးပဲ။ ဘဝဟာ ကနြေပျစရာ မကောငျးတဲ့အနအေထားတှေ ရှိသလို ကနေပျစရာ ကောငျးတာလညျး မရှိဘူးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ရှိပါတယျ။ ဘဝဟာ အဆိုးခညျြးပဲတော့ မဟုတျဘူး။ အကောငျးလညျးရှိတယျ။ အကောငျးရှိလို့ လူတှကေ ဘဝမှာပြျောရှငျနကွေတယျပေါ့။
အဲ့ဒီကောငျးတဲ့အကှကျကလေးတှေ သာယာဖှယျ ကနြေပျဖှယျ လကျခံဖှယျ ​အခကျြကလေးတှေ စာပကေမျြးဂနျမှာ ဘာပွောသလဲဆိုတော့’အသာဒ’လို့ချေါတယျ။ အဲ့ဒီကနြေပျစရာလေးတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ လူတှဟော ဘဝကိုလကျခံပွီးတော့ ကနြေပျနကွေတာ။
ဒါဖွငျ့ဘဝဟာကနြေပျစရာခညျြးပဲလားဆိုတော့ မဟုတျဘူး။ အပွဈအနာအဆာတှကေလညျး အမြားကွီး အခကျအခဲတှကေလညျး အမြားကွီး ဆိုတာရှိတယျ။
ဘဝကို ငွီးငှသှေ့ားကွတယျပေါ့။ပြျောနတေဲ့ပုဂ်ဂိုလျဟာ ကနြေပျစရာလေးတှေးပွီး ပြျောနတော။ငွီးငှသှေ့ားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေလညျး ဘဝရဲ့အစဈအမှနျကိုရှု့မွငျသုံးသပျပွီးတော့ ဘဝကလှတျအောငျကွိုးစားသှားကွတာ။
မကွိုးစားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေဘာနဲ့ဥပမာတူသလဲဆိုရငျ ​ကနြေပျစရာကောငျးတာလေး ကွညျ့ပွီးတော့ထိုကနြေပျစရာကောငျးတဲ့အခကျြရဲ့ နောကျကှယျမှာရှိတဲ့ အငျမတနျမှ ကွောကျစရာကောငျးတာတှေ မမွငျတာ။
ဥပမာမယျ- သငျတုနျးဓါးပျေါမှာ ပြားရညျတဈစကျပြားရညျရဲ့အခြိုကိုသာတှေးပွီး သငျတုနျးဓါးက မိမိရဲ့လြှာကိုဖွတျမယျဆိုတာမမွငျတဲ့သဘောပဲပေါ့။
သငျတုနျးဓါးပျေါက ပြားရညျလေးတဈစကျကိုမကျမကျမောမော လြှာနဲ့လြှကျလိုကျမယျဆိုရငျ ခြိုလို့မှမပွီးခငျ လြှာပွတျသှားမယျ။ဘဝဆိုတာ အဲ့ဒီအတိုငျးပဲလို့ ဆိုလိုတာ။
ဘဝမှာ ကနြေပျစရာဆိုတာ ဘာကိုပွောတာလဲဆိုတော့ ဘဝကိုအကွောငျးပွုပွီးတော့ သုခသောမနဿလို့​ချေါတဲ့ ကိုယျခမျြးသာမှု စိတျခမျြးသာမှုတှဟော ဘဝနဲ့ပတျသကျပွီး ရနိုငျတာတှေ ရှိတယျပေါ့။ ယနေ့.. တရားခဈြခငျသူတျောစငျတို့ စဉျးစားကွညျ့ပေါ့။ မိမိတို့ဘဝမှာ အဆငျပွနေတောတှေ ရှိတယျ။
မိသားစုနဲ့ ​ပြျောပြျောရှငျရှငျ နကွေတယျ။ စီးပှားဥစ်စာတှေ အဆငျပွနေတေယျ။ ကနျြးမာရေးလညျး ပွလေညျတယျ။
ဒီလိုမိသားစု အဆငျပွနေပွေီဆိုရငျ စိတျခမျြးသာမှုကိုမရဘူးမဟုတျဘူး ရကွတယျ။ အဲ့ဒီလိုရတာဟာ ဘဝအတှကျ ကနြေပျစရာလေးတဈခုပဲ။
နောကျတဈခုပွောမယျဆိုရငျ ဘဝကိုအရငျးတညျပွီးတော့ ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ လုပျခှငျ့ရတာလညျး ဘဝနဲ့ပတျသကျပွီး ကနြေပျစရာလို့ ဒီလိုပွောရမယျ။
ဒါဖွငျ့မကနြေပျစရာ စိတျပကျြစရာက ဘာတှလေဲဆိုတော့ဟောဒီဘဝကွီးဟာ မတညျမွဲဘူး။ နုပြိုနရောက အိုမငျး ရငျ့ရျောပွီးတော့ သှားတယျ။ ကနျြးမာနရောက မကနျြးမမာဖွဈလာတယျ။
အသကျရှငျရာကနေ နောကျဆုံးဘဝတဈခု စှနျ့ခှာသှားရတယျ။ မိမိမွတျနိုးတဲ့ ပစ်စညျးဥစ်စာ မိမိခဈြခငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ ခှဲခှာပွီးတော့ သှားရတယျဆိုတာ။
ဘဝရဲ့အဆိုးတရားပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီလိုအဆိုးတရားတှေ ကွညျ့ပွီးတော့ ဒါမြိုးတှေ နောကျထပျမလိုခငျြတော့ဘူး… ဆိုလို့ရှိရငျဘဝကိုတှယျတာတဲ့ တဏှာကိုဖယျရှားပွဈဖို့ လိုအပျတယျပေါ့။
ဘဝကထှကျမွောကျမှုဆိုတာ ဘဝကိုတှယျတာမှုကို ဖယျရှားမှ မဖယျရှားနိုငျပဲနဲ့ ခမျြးသာလေးတဈခုကို မကျမောပွီးတော့ ဘဝမှာ ပြျောနကွေမယျဆိုရငျကတော့ သံသရာဝဋျက လှတျဖို့မရှိတော့ဘူး ဒီလိုဆိုတာပေါ့နျော။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ တဈခဏပဲဖွဈဖွဈ အမှတျတမဲ့မနကွေပဲနဲ့..ဘဝရဲ့အပွဈတှကေို ရှု့မွငျ သုံးသပျကွညျ့ဖို့ လိုအပျတယျပေါ့။အဲ့ဒီလို ဘဝရဲ့အပွဈကို ရှု့မွငျသုံးသပျတဲ့အခါမှ
ဘဝအပျေါမှာ သံဝဂေစိတျဖွဈပှားပွီးတော့ သံသရာက လှတျကွောငျးဆိုတဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားတှေ တိုးတကျပှာမြားလာမှာ ဖွဈတယျပေါ့။
အေးဒါကွောငျ့မို့လို့ ဘဝဆိုတာကိုတော့ မွတျစှာဘုရား ကျိုယျ​တျောမွတျက ဘယျတော့မှ မခြီးမှမျးဘူး။ ဘယျလောကျတိုတောငျးတဲ့ အခြိနျပိုငျးလေးရတဲ့ ဘဝဖွဈဖွဈ ရှညျလြားတဲ့ဘဝမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဘယျဘဝကိုမှ မွတျစှာဘုရားက မခြီးမှမျးဘူး။ ဘုရားက ဥပမာပေးထားတာ အလှနျထငျရှားတယျ။
လူတှရေဲ့ မစငျအညဈအကွေးဟာ နညျးနညျးလေးလညျး အနံ့ဆိုးတာပဲ။ အမြားကွီးမှ အနံ့ဆိုးတာ မဟုတျဘူး။ ဘဝဟာလညျးပဲ တဈခဏလေးရတဲ့ ဘဝဟာလညျးပဲ ဒုက်ခဖွဈတာပဲ။
ဒီလိုဆိုတာပေါ့နျော။ အေးဒါကွောငျ့မို့လို့ ဘဝအပျေါမှာ သံဝဂေစိတျနဲ့ ရှု့မွငျသုံးသပျတပျဖို့ လိုအပျတယျပေါ့။ ဒီလို အန်တရာယျတှမြေားနတေဲ့ ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးနကွေရတဲ့အခါမှာ
ထိုဘဝကနေ ကောငျးမွတျတဲ့အရာတှေ မရယူနိုငျဘူးဆိုရငျ ဘဝဟာအရှုံးနဲ့ပဲ ပိသှားမယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အဲ့ဒီလို မဖွဈကွရအောငျ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ဆငျခွငျသုံးသပျပွီး
အလေးအနကျထား ကွညျ့ကွရမှာဖွဈတယျ။ ဒီလိုကွညျ့နိုငျတာလညျးပဲ ဘုရားပှငျ့တဲ့အခါ မွတျစှာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတရားတှကေို ကွားနာကွရမှသာ ကွညျ့နိုငျတာကိုး။
အနို့မို့ဆိုရငျ….ဒီလိုစိတျဓာတျမြိုးပျေါဖို့ဆိုတာ ဝေးစှပဲ။ဘဝအပျေါမှာရှု့မွငျသုံးသပျတပျဖို့ဆိုတာကလညျး ဝေးလစှေပဲ။
ဒါကွောငျ့မို့ အသိဉာဏျရှိတဲ့ဘဝမှာ ဘဝရဲ့အပွဈအနာဆာတှကေို ကွညျ့တတျ မွငျတတျဖို့ လိုအပျတယျ။ ဟုတျပွီ… မရှောငျသာလို့ ဘဝခရီးသှားကွရတယျ ဆိုလို့ရှိရငျ
ဘဝရဲ့ဒုက်ခသုတျခ အခကျအခဲတှေ နညျးနိုငျသမြှ နညျးအောငျ ဘာလုပျကွရမလဲဆိုတော့ ခရီးသှားတဲ့အခါမှာ ရိက်ခာဆိုတာ ယူသှားကွရတယျပေါ့။
လိုအပျတဲ့နရောမှာ အသုံးပွုဖို့။ လိုအပျတဲ့နရော လိုသလို အသုံးခဖြို့ လမျးစရိတျတို့ ရိက်ခာတို့ဆိုတာ ပါကွရမယျ။ လမျးစရိတျတှေ ရိက်ခာတှေ ပါသှားပွီဆိုရငျအခကျအခဲတှဟော နညျးသှားလိမျ့မယျပေါ့။
အေးဒါကွောငျ့မို့လို့ ဘဝရိက်ခာဆိုတာ ဘာလဲလို့မွတျစှာဘုရားက ဟောတဲ့အခါမှာ ဘဝရိက်ခာဆိုတာ ကုသိုလျပဲဖွဈတယျပေါ့။ဒါနကောငျးမှု လုပျတယျ။
သီလ ဆောကျတညျတယျ။သမထ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ ကမ်မဋ်ဌာနျးကို အားထုတျတယျ ဆိုတာဟာ ရိက်ခာစုဆောငျးခွငျးပငျဖွဈတယျပေါ့။
ကိုယျသှားတဲ့ဘဝမှာ ဒါနကောငျးမှုလုပျသှားလို့ ဒါနကုသိုလျဆိုတဲ့ ရိက်ခာပါလို့ရှိရငျ ဘယျဘဝရောကျရောကျ စားရမယျ့မယျ့ သောကျရမယျ့မယျ့ ဆငျးဆငျးရဲရဲနရေမယျ့ ဘမြိုးမဖွဈဘူး။ အိုတာတော့ အိုမယျ။
နာတာတော့ နာမယျ။ သတောတော့ သမေယျ။ မအို မနာ မသခေငျမှာ ခမျြးသာ သုခတှေ ရနိုငျသေးတယျ။ ဒီလို ဆိုတာပေါ့နျော။
ဘဝခရီးမှာ အခကျအခဲတှေ သကျသာသှားအောငျ အကယျ၍ ဒါနဆိုတဲ့ ကုသိုလျရိက်ခာ မပါဘူးဆိုရငျ ပငျပနျးလှတဲ့ဘဝမှာ ထပျဆငျ့ပွီးတော့ စားစရာကမပွလေညျး​
သောကျစရာကမပွလေညျ နစေရာကမရှိ ဝတျစရာကမရှိ ဆငျးရဲဒုက်ခအတိနဲ့ အသကျမှေးရတယျ။
ဘဝမှာလညျးပဲ မကွာခငျ အိုမငျး ရငျ့ရျော ဝဒေနာတှဖွေဈ.. နောကျဆုံး သဖေို့ဝငျရတဲ့အနအေထားမြိုးထိ ရောကျသှားနိုငျတယျပေါ့။
ဒါက အလေးအနကျ ဆငျခွငျစဉျးစားဖို့။ တို့တော့ ဒီလို မဖွဈပါဘူးလို့တော့ မအောငျ့မလေ့နေဲ့..။ ရိက်ခာမပါသူတိုငျးဟာ ဒီတိုငျး ဖွဈကိုဖွဈမှာ။
ဒါကွောငျ့မို့ ဒါနကုသိုလျဆိုတဲ့ ရိက်ခာကိုလညျး ပါအောငျ ယူကွရတယျ။ အေးသီလဆိုတဲ့ ရိက်ခာမပါဘူးဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲဆိုတော့ လူ့ဘဝရောကျလာပွီ မကွာခငျပဲ သသှေားကွ။
ရောဂါဝဒေနာတှမြေားတယျ။ ဟော… “ပါဏာတိပါတ”ဆိုတဲ့ ကိုယျကငျြ့သီလ ရှောငျကွဉျမှုကို ယိုယှငျးလာတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျဟာ ဘဝမှာပွညျ့စုံတဲ့ဘဝ မရတဲ့အပွငျမှာ
လူဖွဈရသျောလညျး ရောဂါဝဒေနာတှေ ထူပွောလို့ နောကျဆုံးမှာအသကျရှညျရှညျမနရေပဲနဲ့ ဒုက်ခတှေ ဘလပှနေဲ့ ငယျငယျနဲ့ သဆေုံးသှားကွတာတှေ ပွညျ့လို့ပဲ။ အဲ့ဒါ ပါဏာတိပါတမလုံလို့။
အေး ပါဏာတိပါတတော့လုံပွီ.. ”အဒိန်နာဒါန”တော့
မလုံးဘူးဆိုရငျ ဒီသီလရိက်ခာမပါရငျ ရှိလာတဲ့ပစ်စညျးလေး တျောကွာ မီးလောငျတဲ့အထဲပါသှားပွနျပွီ။ ရမွေောတဲ့အထဲ ပါသှားပွနျပွီ။ တျောကွာ အသိမျးခံလိုကျရပွီ။
သူခိုးဓါမွထဲ ပါသှားပွနျပွီ။ အိမျမှာ သားဆိုး သမီးဆိုးတှကေနပွေီးတော့ မူးယဈဆေးဝါးသုံးပွီး ဖွုနျးပဈလိုကျပွနျပွီ။
စိတျဆငျးရဲစရာတှနေဲ့ခညျြး ကွုံတယျ။ အဒိန်နဒါနာမလုံဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ပစ်စညျးဟာ တဈနညျးမဟုတျတဈနညျး ပကျြစီးဆုံးရှုံးရမှုနဲ့ ကွုံတယျ။
ကာမသေုမိစ်ဆာစာရ မလုံဘူးဆိုရငျ..အေး.. အသကျတော့ရှညျပါရဲ့ ပစ်စညျးဥစ်စာလညျးပေါပါရဲ့ .. အရပျထဲမှာ လူတဈကာက ရှံ့ရတဲ့ လူမုနျးသူမုနျး ခံရတဲ့ပုဂ်ဂိုလျမြိုးဖွဈတယျ။
လူမုနျးသူမုနျးခံရတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျဟာလညျးပဲ ဘယျတော့မှ စိတျခမျြးသာမှုရမှာ မဟုတျဘူး။ အမြားနဲ့ဆကျဆံနိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုးမရှိဘူး။
အမြားရဲ့ခဉျြဖကျဖွဈပွီး ဘယျသူကမှ အဖကျမလုပျတဲ့ သူမြိုးဖွဈရငျလညျး တဈသကျလုံး စိတျဆငျးရဲပွီးနကွေမှာပဲပေါ့။ နောကျတဈခု အားလုံးတော့ ပွညျ့စုံပါရဲ့… မတရားစှတျစှဲခံရတယျ၊
မတရားဖမျးစညျးခံရတယျ ဆိုတာ မုသာဝါဒမလုံလို့။ မိမိကျိုယျတိုငျက မမှနျမကနျပွောခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့ ကျိုယျ့ကိုလညျး မမှနျကနျတဲ့ အကွောငျးအရာတှနေဲ့ အကွိမျကွိမျ စှပျစှဲပွောဆိုခံရတတျတယျ။
ဘဝဒုက်ခတှေ ပိုမြားတာပေါ့။ အေးမုသာဝါဒတော့ လုံပွီ။
“သုရာမရေယ” မလုံဘူးဆိုရငျ မှေးလာကတညျးက ကပျြမပွညျ့တဲ့သူတှေ ဖွဈလာတယျ။ အရူးအနှံးတှေ ဖွဈလာတယျ။ စာသငျလို့မရဘူး။ အသိဉာဏျအားနညျးတယျ။IQ မမှီဘူးဆိုတာဟာ ဒီလိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးတှဖွေဈလာတယျ။
အဲ့ဒီလိုဆိုရငျ လူ့ဘဝရတာအလကားပဲ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့… သီလဆိုတဲ့ရိက်ခာမပါပဲ ခရီးသှားမယျဆိုရငျ ဤအခကျအခဲတှေ ကွုံနဦေးမှာပဲ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ သီလရိက်ခာဆိုတာလညျး
ကိုယျသန်တာနျမှာ ရှိရမယျ့ ဘဝရိက်ခာတဈခုပဲ။ သီလဆိုတဲ့ ကုသိုလျဟာ ဘဝမှာ ကောငျးတဲ့ရိက်ခာတဈခုဖွဈတယျ။အသကျရှညျတယျ ပစ်စညျးဥစ်စာတှပေေါမြားတယျ လူခဈြလူခငျပေါတယျ။ အစှပျအစှဲ အလိမျအညာမခံရဘူး။
အသိဉာဏျ ​ကွှယျဝတယျဆိုတော့ ဟော… တဈဘဝပွီးတဈဘဝ ပိုပွီးတော့ မွငျ့တဲ့အဆငျ့ကို ရောကျရှိသှားနိုငျပါတယျတဲ့။ ဒီလိုပွောတာနျော။ သာမနျလေးမနနေဲ့…။ အလေးအနကျ ဆငျခွငျစဉျးစားဖို့ လိုတယျပေါ့။
သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ ဘာဝနာကုသိုလျဆိုတာလညျး ဘဝခရီးသှားတဲ့အခါမှာ ပါရမယျ့ရိက်ခာတဈမြိုးပဲ။ အဲ့ဒါမပါလို့ရှိရငျ သာသနာတျောနဲ့ တှသေ့ျောလညျး တရားထူးတရားမွတျရနိုငျဖို့ရနျ ခကျခဲတယျပေါ့။
သူတျောစငျတှနေဲ့တော့ တှပေ့ါရဲ့ တရားဓမ်မနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမှနားမလညျဘူး။ နားမလညျပဲနဲ့ ဘဝတဈခု အဆုံးသတျ​သှားပွနျတယျ။ တှရေ့တဲ့အခါက အငျမတနျမှ နညျးတယျ။ မတှရေ့တာကအမြားကွီး။
ဒီလိုနဲ့ သံသရာထဲမှာ ဘယျတော့မှ မလှတျနိုငျတဲ့ ဆငျးရဲဒုက်ခတှကေို ခံစားပွီး ရိက်ခာမပါဘူးဆိုရငျ အခုလို အခကျအခဲတေ ကွုံတှခေံ့စားရလိမျ့မယျ။
ဒါဖွငျ့.. မွတျစှာဘုရားက ဘဝရိက်ခာဆိုတာ ဒါနကုသိုလျ သီလကုသိုလျ ဘာဝနာကုသိုလျမိမိတို့သန်တာနျမှာ ရနိုငျသလောကျ စု​ဆောငျးပွီး ဘဝခရီးကို သှားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေတြော့ အငျမတနျမှခမျြးသာတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျစဉျးစားကွ.. ငါရော ရိက်ခာတှေ ရှိပွီလားလို့??
တနမေ့ဟုတျတနေ့ အရှယျရလာတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျ ဘုနျးကွီးတို့ဘဝဟာ သဈရှကျဝါဖွဈလာကွပွီ။ ကွှမေယျမကွာခငျ ။လပွေလေေး မ..တို့လိုကျနဲ့ တို့.. လိုကျတာနဲ့.. ဘုတျကနဲဆို ကွှကွေတော့မှာ။
အဲ့ဒီလို ရငျ့ရျောလာတဲ့ အရှကျဖွဈလာတဲ့အပွငျ သမေငျးတမနျတှကေလညျး အိမျတံခါးလာခေါကျနပွေီ။ ဘယျကနခေေါကျလဲ ခေါငျးကိုလညျးခေါကျတာပဲ။
ပါးစပျလညျး လာခေါကျတာပဲ။ ခေါကျလိုကျတာနဲ့ သှားတဈခြောငျး ပွုတျထှကျသှားတယျ။ ခေါငျးတဈခကျြ ခေါကျလိုကျရငျ ဆံပငျတှဖွေူသှားတယျ။
အဲ့ဒီလို သမေငျးရဲ့တမနျတှကေလညျး တံခါးလာခေါကျနကွေပွီ။ သဖေို့လမျးဆုံး လမျးဝ ရောကျနကွေပွီ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ရိက်ခာရှိပွီလား ကိုယျ့မှာ စဉျးစားရမှာ။
ကုသိုလျဆိုတဲ့ ရိက်ခာတှကေိုယျမှာ ပါပွီလား????
မပါသေးဘူးဆိုရငျ ရိက်ခာဆိုတာ အရကွေီးတယျ။
(“ဘဝရိက်ခာ”တရားတျောမှ ကောကျနှုတျခကျြ ​ရေးသားခကျြ​)
သောကဖြစ်လာလို့ မထိန်းနိုင်တဲ့အခါ ငိုခဲ့ရတဲ့အခါတွေကလည်းအများကြီး။ ကိုယ်ဆင်းရဲမှု စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဆိုတာလည်း များစွာကြုံတွေ့ရလို့ ဘဝခရီးဟာ လျှောက်လမ်းကြသူတိုင်း ဘယ်သူမှ မသက်သာဘူးလို့ ဒီလိုပြောရမှာ။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းကြရတဲ့အခါမှာသက်သာမှုရသလားဆိုတော့ ဘယ်သက်သာမှု ရမလဲ။
အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆို ဗိုက်​နာရတယ် ဒါထင်ရှားတာလေးတစ်ခု။ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလာန် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းရောဂါဝေဒနာတွေ ခံစားရတယ်။
နောက်ဆုံးကြတော့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အခုခေတ်အနေ နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး ပရိနိဗ္ဗာန်စံရတာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရတယ်လို့
ဒါ ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေပဲ။သာမန်အားဖြင့် မစဉ်းစားပဲနေလို့ရှိရင် ဘဝမှာအခက်အခဲ မရှိဘူး။ပျော်စရာကြီးလို့ မြင်ကောင်း မြင်လိမ့်မယ်။ ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတစ်မျိုးမျိုးတော့ ကြုံတွေ့မှာပဲ သေချာပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ပဲဘဝခရီးကြီးကို လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဘုရားဟာ ဘယ်လောက်ပဲ တန်ခိုးတော်အနန္တနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်စေ
ဘဝခရီးကိုသွားတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းဖြောင့်တန်းနေတဲ့ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းရတာ မဟုတ်ဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံ လူစားတဲ့အစာမဟုတ်တဲ့ မြင်းစာတွေ စားနေရတဲ့အခါမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လုံးဝစားစရာမရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ ကြုံတွေ့ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဆန့်ကျင့်မှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။
စိတ်ဆင်းရဲဖွယ် အနေအထားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာတွေ ရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘဝမှာ စွပ်စွဲမှုကြီး (၂)ကြိမ်ခံရတယ်။ အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ စွပ်စွဲမှုကြီး အခုခေတ်လိုဆို ဖြေရှင်းဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ စွပ်စွဲမှုကြီး (၂)ကြိမ်ခံရတယ်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုက (၃)ကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဘဝဆိုတာ ဘုရားတောင်မှ ရှောင်လို့မရတာပါလားလို့ ဘုန်းကြီးတို့ တရားနာပရိတ်သတ်တွေ ဘဝပေါ်မှာ သံဝေဂဖြစ်ဖို့ပါ။
ဘယ်သူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာ တစ်ခဏမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရတဲ့ဘဝတွေချည်းပဲ။ ဘဝဟာ ကျေနပ်စရာ မကောင်းတဲ့အနေအထားတွေ ရှိသလို ကေနပ်စရာ ကောင်းတာလည်း မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပါတယ်။ ဘဝဟာ အဆိုးချည်းပဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ အကောင်းလည်းရှိတယ်။ အကောင်းရှိလို့ လူတွေက ဘဝမှာပျော်ရွှင်နေကြတယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေ သာယာဖွယ် ကျေနပ်ဖွယ် လက်ခံဖွယ် ​အချက်ကလေးတွေ စာပေကျမ်းဂန်မှာ ဘာပြောသလဲဆိုတော့’အသာဒ’လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီကျေနပ်စရာလေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ လူတွေဟာ ဘဝကိုလက်ခံပြီးတော့ ကျေနပ်နေကြတာ။
ဒါဖြင့်ဘဝဟာကျေနပ်စရာချည်းပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အပြစ်အနာအဆာတွေကလည်း အများကြီး အခက်အခဲတွေကလည်း အများကြီး ဆိုတာရှိတယ်။
ဘဝကို ငြီးငွေ့သွားကြတယ်ပေါ့။ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကျေနပ်စရာလေးတွေးပြီး ပျော်နေတာ။ငြီးငွေ့သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ဘဝရဲ့အစစ်အမှန်ကိုရှု့မြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ ဘဝကလွတ်အောင်ကြိုးစားသွားကြတာ။
မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာနဲ့ဥပမာတူသလဲဆိုရင် ​ကျေနပ်စရာကောင်းတာလေး ကြည့်ပြီးတော့ထိုကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အချက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းတာတွေ မမြင်တာ။
ဥပမာမယ်- သင်တုန်းဓါးပေါ်မှာ ပျားရည်တစ်စက်ပျားရည်ရဲ့အချိုကိုသာတွေးပြီး သင်တုန်းဓါးက မိမိရဲ့လျှာကိုဖြတ်မယ်ဆိုတာမမြင်တဲ့သဘောပဲပေါ့။
သင်တုန်းဓါးပေါ်က ပျားရည်လေးတစ်စက်ကိုမက်မက်မောမော လျှာနဲ့လျှက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ချိုလို့မှမပြီးခင် လျှာပြတ်သွားမယ်။ဘဝဆိုတာ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလို့ ဆိုလိုတာ။
ဘဝမှာ ကျေနပ်စရာဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ သုခသောမနဿလို့​ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ချမ်းသာမှု စိတ်ချမ်းသာမှုတွေဟာ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရနိုင်တာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ယနေ့.. တရားချစ်ခင်သူတော်စင်တို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ မိမိတို့ဘဝမှာ အဆင်ပြေနေတာတွေ ရှိတယ်။
မိသားစုနဲ့ ​ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေကြတယ်။ စီးပွားဥစ္စာတွေ အဆင်ပြေနေတယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ပြေလည်တယ်။
ဒီလိုမိသားစု အဆင်ပြေနေပြီဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရဘူးမဟုတ်ဘူး ရကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုရတာဟာ ဘဝအတွက် ကျေနပ်စရာလေးတစ်ခုပဲ။
နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် ဘဝကိုအရင်းတည်ပြီးတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လုပ်ခွင့်ရတာလည်း ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်စရာလို့ ဒီလိုပြောရမယ်။
ဒါဖြင့်မကျေနပ်စရာ စိတ်ပျက်စရာက ဘာတွေလဲဆိုတော့ဟောဒီဘဝကြီးဟာ မတည်မြဲဘူး။ နုပျိုနေရာက အိုမင်း ရင့်ရော်ပြီးတော့ သွားတယ်။ ကျန်းမာနေရာက မကျန်းမမာဖြစ်လာတယ်။
အသက်ရှင်ရာကနေ နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခု စွန့်ခွာသွားရတယ်။ မိမိမြတ်နိုးတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ မိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခွဲခွာပြီးတော့ သွားရတယ်ဆိုတာ။
ဘဝရဲ့အဆိုးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒီလိုအဆိုးတရားတွေ ကြည့်ပြီးတော့ ဒါမျိုးတွေ နောက်ထပ်မလိုချင်တော့ဘူး… ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုတွယ်တာတဲ့ တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့။
ဘဝကထွက်မြောက်မှုဆိုတာ ဘဝကိုတွယ်တာမှုကို ဖယ်ရှားမှ မဖယ်ရှားနိုင်ပဲနဲ့ ချမ်းသာလေးတစ်ခုကို မက်မောပြီးတော့ ဘဝမှာ ပျော်နေကြမယ်ဆိုရင်ကတော့ သံသရာဝဋ်က လွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူး ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်ခဏပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တမဲ့မနေကြပဲနဲ့..ဘဝရဲ့အပြစ်တွေကို ရှု့မြင် သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလို ဘဝရဲ့အပြစ်ကို ရှု့မြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှ
ဘဝအပေါ်မှာ သံဝေဂစိတ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ သံသရာက လွတ်ကြောင်းဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ တိုးတက်ပွာများလာမှာ ဖြစ်တယ်ပေါ့။
အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝဆိုတာကိုတော့ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်​တော်မြတ်က ဘယ်တော့မှ မချီးမွှမ်းဘူး။ ဘယ်လောက်တိုတောင်းတဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ ဘဝဖြစ်ဖြစ် ရှည်လျားတဲ့ဘဝမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘဝကိုမှ မြတ်စွာဘုရားက မချီးမွှမ်းဘူး။ ဘုရားက ဥပမာပေးထားတာ အလွန်ထင်ရှားတယ်။
လူတွေရဲ့ မစင်အညစ်အကြေးဟာ နည်းနည်းလေးလည်း အနံ့ဆိုးတာပဲ။ အများကြီးမှ အနံ့ဆိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝဟာလည်းပဲ တစ်ခဏလေးရတဲ့ ဘဝဟာလည်းပဲ ဒုက္ခဖြစ်တာပဲ။
ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝအပေါ်မှာ သံဝေဂစိတ်နဲ့ ရှု့မြင်သုံးသပ်တပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့။ ဒီလို အန္တရာယ်တွေများနေတဲ့ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေကြရတဲ့အခါမှာ
ထိုဘဝကနေ ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေ မရယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘဝဟာအရှုံးနဲ့ပဲ ပိသွားမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီလို မဖြစ်ကြရအောင် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး
အလေးအနက်ထား ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကြည့်နိုင်တာလည်းပဲ ဘုရားပွင့်တဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတရားတွေကို ကြားနာကြရမှသာ ကြည့်နိုင်တာကိုး။
အနို့မို့ဆိုရင်….ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်ဖို့ဆိုတာ ဝေးစွပဲ။ဘဝအပေါ်မှာရှု့မြင်သုံးသပ်တပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ဝေးလေစွပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝမှာ ဘဝရဲ့အပြစ်အနာဆာတွေကို ကြည့်တတ် မြင်တတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဟုတ်ပြီ… မရှောင်သာလို့ ဘဝခရီးသွားကြရတယ် ဆိုလို့ရှိရင်
ဘဝရဲ့ဒုက္ခသုတ်ခ အခက်အခဲတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဘာလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ ရိက္ခာဆိုတာ ယူသွားကြရတယ်ပေါ့။
လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုဖို့။ လိုအပ်တဲ့နေရာ လိုသလို အသုံးချဖို့ လမ်းစရိတ်တို့ ရိက္ခာတို့ဆိုတာ ပါကြရမယ်။ လမ်းစရိတ်တွေ ရိက္ခာတွေ ပါသွားပြီဆိုရင်အခက်အခဲတွေဟာ နည်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့။
အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝရိက္ခာဆိုတာ ဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားက ဟောတဲ့အခါမှာ ဘဝရိက္ခာဆိုတာ ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါနကောင်းမှု လုပ်တယ်။
သီလ ဆောက်တည်တယ်။သမထ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်တယ် ဆိုတာဟာ ရိက္ခာစုဆောင်းခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။
ကိုယ်သွားတဲ့ဘဝမှာ ဒါနကောင်းမှုလုပ်သွားလို့ ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ရိက္ခာပါလို့ရှိရင် ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် စားရမယ့်မယ့် သောက်ရမယ့်မယ့် ဆင်းဆင်းရဲရဲနေရမယ့် ဘမျိုးမဖြစ်ဘူး။ အိုတာတော့ အိုမယ်။
နာတာတော့ နာမယ်။ သေတာတော့ သေမယ်။ မအို မနာ မသေခင်မှာ ချမ်းသာ သုခတွေ ရနိုင်သေးတယ်။ ဒီလို ဆိုတာပေါ့နော်။
ဘဝခရီးမှာ အခက်အခဲတွေ သက်သာသွားအောင် အကယ်၍ ဒါနဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ရိက္ခာ မပါဘူးဆိုရင် ပင်ပန်းလှတဲ့ဘဝမှာ ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ စားစရာကမပြေလည်း​
သောက်စရာကမပြေလည် နေစရာကမရှိ ဝတ်စရာကမရှိ ဆင်းရဲဒုက္ခအတိနဲ့ အသက်မွေးရတယ်။
ဘဝမှာလည်းပဲ မကြာခင် အိုမင်း ရင့်ရော် ဝေဒနာတွေဖြစ်.. နောက်ဆုံး သေဖို့ဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးထိ ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။
ဒါက အလေးအနက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့။ တို့တော့ ဒီလို မဖြစ်ပါဘူးလို့တော့ မအောင့်မေ့လေနဲ့..။ ရိက္ခာမပါသူတိုင်းဟာ ဒီတိုင်း ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ရိက္ခာကိုလည်း ပါအောင် ယူကြရတယ်။ အေးသီလဆိုတဲ့ ရိက္ခာမပါဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ လူ့ဘဝရောက်လာပြီ မကြာခင်ပဲ သေသွားကြ။
ရောဂါဝေဒနာတွေများတယ်။ ဟော… “ပါဏာတိပါတ”ဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလ ရှောင်ကြဉ်မှုကို ယိုယွင်းလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့ဘဝ မရတဲ့အပြင်မှာ
လူဖြစ်ရသော်လည်း ရောဂါဝေဒနာတွေ ထူပြောလို့ နောက်ဆုံးမှာအသက်ရှည်ရှည်မနေရပဲနဲ့ ဒုက္ခတွေ ဘလပွေနဲ့ ငယ်ငယ်နဲ့ သေဆုံးသွားကြတာတွေ ပြည့်လို့ပဲ။ အဲ့ဒါ ပါဏာတိပါတမလုံလို့။
အေး ပါဏာတိပါတတော့လုံပြီ.. ”အဒိန္နာဒါန”တော့
မလုံးဘူးဆိုရင် ဒီသီလရိက္ခာမပါရင် ရှိလာတဲ့ပစ္စည်းလေး တော်ကြာ မီးလောင်တဲ့အထဲပါသွားပြန်ပြီ။ ရေမြောတဲ့အထဲ ပါသွားပြန်ပြီ။ တော်ကြာ အသိမ်းခံလိုက်ရပြီ။
သူခိုးဓါမြထဲ ပါသွားပြန်ပြီ။ အိမ်မှာ သားဆိုး သမီးဆိုးတွေကနေပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီး ဖြုန်းပစ်လိုက်ပြန်ပြီ။
စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့ချည်း ကြုံတယ်။ အဒိန္နဒါနာမလုံဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုနဲ့ ကြုံတယ်။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မလုံဘူးဆိုရင်..အေး.. အသက်တော့ရှည်ပါရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါပါရဲ့ .. အရပ်ထဲမှာ လူတစ်ကာက ရွံ့ရတဲ့ လူမုန်းသူမုန်း ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။
လူမုန်းသူမုန်းခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာလည်းပဲ ဘယ်တော့မှ စိတ်ချမ်းသာမှုရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အများနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။
အများရဲ့ချဉ်ဖက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူကမှ အဖက်မလုပ်တဲ့ သူမျိုးဖြစ်ရင်လည်း တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲပြီးနေကြမှာပဲပေါ့။ နောက်တစ်ခု အားလုံးတော့ ပြည့်စုံပါရဲ့… မတရားစွတ်စွဲခံရတယ်၊
မတရားဖမ်းစည်းခံရတယ် ဆိုတာ မုသာဝါဒမလုံလို့။ မိမိကိုယ်တိုင်က မမှန်မကန်ပြောခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုလည်း မမှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် စွပ်စွဲပြောဆိုခံရတတ်တယ်။
ဘဝဒုက္ခတွေ ပိုများတာပေါ့။ အေးမုသာဝါဒတော့ လုံပြီ။
“သုရာမေရယ” မလုံဘူးဆိုရင် မွေးလာကတည်းက ကျပ်မပြည့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အရူးအနှံးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ စာသင်လို့မရဘူး။ အသိဉာဏ်အားနည်းတယ်။IQ မမှီဘူးဆိုတာဟာ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။
အဲ့ဒီလိုဆိုရင် လူ့ဘဝရတာအလကားပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့… သီလဆိုတဲ့ရိက္ခာမပါပဲ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဤအခက်အခဲတွေ ကြုံနေဦးမှာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သီလရိက္ခာဆိုတာလည်း
ကိုယ်သန္တာန်မှာ ရှိရမယ့် ဘဝရိက္ခာတစ်ခုပဲ။ သီလဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ဟာ ဘဝမှာ ကောင်းတဲ့ရိက္ခာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အသက်ရှည်တယ် ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများတယ် လူချစ်လူခင်ပေါတယ်။ အစွပ်အစွဲ အလိမ်အညာမခံရဘူး။
အသိဉာဏ် ​ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတော့ ဟော… တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝ ပိုပြီးတော့ မြင့်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုပြောတာနော်။ သာမန်လေးမနေနဲ့…။ အလေးအနက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်ပေါ့။
သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာလည်း ဘဝခရီးသွားတဲ့အခါမှာ ပါရမယ့်ရိက္ခာတစ်မျိုးပဲ။ အဲ့ဒါမပါလို့ရှိရင် သာသနာတော်နဲ့ တွေ့သော်လည်း တရားထူးတရားမြတ်ရနိုင်ဖို့ရန် ခက်ခဲတယ်ပေါ့။
သူတော်စင်တွေနဲ့တော့ တွေ့ပါရဲ့ တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှနားမလည်ဘူး။ နားမလည်ပဲနဲ့ ဘဝတစ်ခု အဆုံးသတ်​သွားပြန်တယ်။ တွေ့ရတဲ့အခါက အင်မတန်မှ နည်းတယ်။ မတွေ့ရတာကအများကြီး။
ဒီလိုနဲ့ သံသရာထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မလွတ်နိုင်တဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ခံစားပြီး ရိက္ခာမပါဘူးဆိုရင် အခုလို အခက်အခဲတေ ကြုံတွေ့ခံစားရလိမ့်မယ်။
ဒါဖြင့်.. မြတ်စွာဘုရားက ဘဝရိက္ခာဆိုတာ ဒါနကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ်မိမိတို့သန္တာန်မှာ ရနိုင်သလောက် စု​ဆောင်းပြီး ဘဝခရီးကို သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ အင်မတန်မှချမ်းသာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြ.. ငါရော ရိက္ခာတွေ ရှိပြီလားလို့??
တနေ့မဟုတ်တနေ့ အရွယ်ရလာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဘုန်းကြီးတို့ဘဝဟာ သစ်ရွက်ဝါဖြစ်လာကြပြီ။ ကြွေမယ်မကြာခင် ။လေပြေလေး မ..တို့လိုက်နဲ့ တို့.. လိုက်တာနဲ့.. ဘုတ်ကနဲဆို ကြွေကြတော့မှာ။
အဲ့ဒီလို ရင့်ရော်လာတဲ့ အရွက်ဖြစ်လာတဲ့အပြင် သေမင်းတမန်တွေကလည်း အိမ်တံခါးလာခေါက်နေပြီ။ ဘယ်ကနေခေါက်လဲ ခေါင်းကိုလည်းခေါက်တာပဲ။
ပါးစပ်လည်း လာခေါက်တာပဲ။ ခေါက်လိုက်တာနဲ့ သွားတစ်ချောင်း ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ ခေါင်းတစ်ချက် ခေါက်လိုက်ရင် ဆံပင်တွေဖြူသွားတယ်။
အဲ့ဒီလို သေမင်းရဲ့တမန်တွေကလည်း တံခါးလာခေါက်နေကြပြီ။ သေဖို့လမ်းဆုံး လမ်းဝ ရောက်နေကြပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရိက္ခာရှိပြီလား ကိုယ့်မှာ စဉ်းစားရမှာ။
ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ရိက္ခာတွေကိုယ်မှာ ပါပြီလား????
မပါသေးဘူးဆိုရင် ရိက္ခာဆိုတာ အရေကြီးတယ်။
(“ဘဝရိက္ခာ”တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ချက် ​ရေးသားချက်​)